Mootummaan Wayyaanee maqaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhuun ammas ilmaan Oromoo irratti shira guddaa xaxaa jiraa jiraachuun saaxilame. | QEERROO
Mootummaan Wayyaanee maqaa hidhamtoota siyaasaa hiikuu jedhuun ammas ilmaan Oromoo irratti shira guddaa xaxaa jiraa jiraachuun saaxilame.
Uummanni nagaa qabamanii yeroo hidhaatti darbaman
[SQ Amajji 18/2018] Akkuma namuu quba qabu mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo darbe hidhamtoonnivsiyaasaa akka lakkifaman ibsuunsaa ni yaadatama. Ibsa usaanii kanaanis wantoota waliin faallaafi wal xaxaa hojjetaas tureera. Namoota gadhiifamu jedhaman keessaa Ilmaan Oromoo kana dura mana hidhaa keessatti ajjeefaman maqaa itti dabalanii waamuun nama gowwoomsaa turaniiru.
Namoota 115 nibahu jedhame keessaa namni lubbuun jiru 111 qofaa akka ta’eefi Isaan keessaayis namoota 2 deebisanii hambisanii jiru. Kanneen nibahu jedhaman amma 109 qofa kan jiran yommuu ta’u, Namoota 109 bahuuf jiran keessaa ilmaan Oromoo lakkoofsaan 50 akka hin guunne himame. Namootuma lakkoofsaan 50 gadi tahan sana keessatti kan argamu maqaa ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti wareegamaniiti. Kanaafuu, Wayyaaneen namootuma hidhaadhaa nibaasti jedhamee eeggamaa jiru sana keessaayyuu lakkoofsi ilmaan Oromoo hedduu xiqqaa akka ta’e beekameera. Mana hidhaa guutee kan jiru lakkoofsaan guddaan ilmaan Oromoo akka ta’e namuu quba qaba.
Walumaagalatti namootni nibahu jedhamanii eegaman mana hidhaa Qilinxoorraa
Zoonii 1…namoota 31
Zoonii 2…namoota 34
Zoonii 3…namoota 46
Zoonii 4 fi Zoonii 5 keessaa namuu bahuuf maqaa hindhahamne ta’uus maddeen nuuf gabaasan.
Haatahu malee, lakkoofsa olitti tarreeffame keessa namootni lama kanneen maqaan isaanii galmee himannaa ‘Mato_Alaqa’ Maasrashaa Saxxee jalatti argamu akka hafan taasifamee jira. Isaanis;
2. Tolasaa kanneen jedhaman akk ta’e odeeffannoon karaa gabaasaa keenyaa mana hidhaa Qilinxoorraa nu qaqqabe addeesseera.
Kanaafuu, ummatni Oromoo Wayyaaneen hidhamtoota siyaasaa gadi nuuf lakkisaa jirti jedhanii daldala siyaasaa Wayyaaneen karaa miidiyaatiin nurratti afarsaa jirtu eegurra qabsoo eegalame roga hundaan finiinsanii Wayyaaneetti xumura godhuu qabu!
Guyyaa kaleessaa namoonni mana hidhaa wayyaanee sana keessaa gadhiifaman Dr. Mararaa dabalatee namoota badii tokko malee sababa gaaffii mirgaa gaafataniif qofa yakkamanii hidhaman ta’uun hubatameera.
Dura taa’aan paartii Koongirasii Federaalistiii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa affeerraa paarlaamaa Awrooppaatiin qaamolee garaa garaa waliin mari’atanii wayita biyyatti deebi’an Sadaasa bara 2016 kan hidhamanidha.
Dr. Mararaan Awurooppaa deebi’anii erga hidhamanii booda Oromiyaa keessatti jeequmsi akka ka’uu fi namaaf qabeenyarra miidhaan akka gahu waamicha gootaniittu jedhamuun mana murti federaalaa dame Lidataa dhaddacha yakkaa 19ffaatti himatamaniiru.
Himanni irratti banames
Dura taa’ummaa Paartii KFO fi paarticha dahoo godhachuun kaayyoo siyaasaa, amantaa fi ilaalcha dhuunfaa galmaan gahuuf yaaduun akkasumas mootummaarratti dhiibbaa uumuun sochilee siyaasa, hawaasummaa fi diinagdee biyyattii jeequufii kuffisuuf socho’aniiru.
Bara 2014 dhimma maastar pilaanii qindaa’aa Finfinneen walqabatee magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti deeggartoota isaanii jeequmsaa fi hokkaraaf kakaasaniiru.
Godina shawaa lixaatti ijaarsa daandii magaalaa Amboo gara Kaarraa geessuu addaan kuchisiisuun, kaampii gubsiisuun konkolaattotaa fi maashinaroota irraa balaa birrii miiliyoonaa lamaa fi kuma dhibba sagaliifii shantami torbaatti shallagamu akka barbadaa’u taasisaniiru jedha.
Magaalaa Burraayyuutti qabeenya birrii miiliyoona 42’tti shallagamu irra balaan akka gahu kakaasuu, godina shawaa kibba lixaatti aanaalee Walisoo, Ammayya, Gooroo, Tolee, Iluu, Qarsaa fi Wanciitti manneen bulchiinsa gandaa, manneen jireenyaa dhuunfaa, dhaabbilee inveestimantii habaaboo fi meeshaalee biroo miiliyoona 17’tti tilmaamamu irratti miidhaan akka gahu taasisaniiru.
Ayyaan irreechaa bara 2016 irratti hidhattoonni mootummaa uummata Oromoo ayyaanicha kabajaa ture irratti ajjechaa raawwataniin namoonni 678 ajjefamaniiru jechuun Televijiinii Oromiyaa Midiyaa Netwoorkitti himuun waamicha jeequmsaa dabarsaniiru kan jedhanidha.
Dr. Mararaan Barataa mana barnootaa Amboo sadarkaa lammaffaa ta’anii wayita jiran hirmaannaa Siyaasaa akka eegalan odeeffannoon seenaasaaniirraa arganne ni addeessa.
Barataa Yunivarsiitii Finfinnee wayita turanittis Miseensa Ma’isoon ta’an.
Miseensa Ma’isoon ta’uu isaaniitiif mootummaan Dargii murtee seeraa malee waggaa torbaaf isaan hidheera. Kufaatii dargii booda paartii siyaasaa hundeesanii hirmaannaa siyaasaa isaanii itti fufan
Bara 1997 filannoo biyyoolessaa irrattti hirmaachuun filatamuun miseensa mana maree bakka bu’oota uummataa ta’an.
Yunivarsiitii baroota hedduuf barnoota siyaansii Siyaasaa itti barsiisan irraa ariyataman
Afferraa Paarlaamaa irratti argamanii wayita deebi’an qabamanii hidhaman
Dr. Marara Guddinaa mootummaa mormuu kan eegalan barataa sadarkaa lammafffaa Amboo wayita turaniifi Qabsoo barattootaa sirna hayla sillaasee kuffisuuf sababa ta’e keessaas harka qabus jedhama.
Bara barataa banoota saayinsii Siyaasaa Yunivarsiitii Finfinnee turanittis sirna bittaa humna waraanaa Mangistuu Haylamaariyaamitti sirnicha mormuun socho’aa turan. Sababa kanaafis murtee yakkaa tokko malee waggoota tptbaaf hidhaman.
Sirni Dargii erga Aangoorra Bu’ee waggoota shan keessatti Dr. Mararaan Paartii biyyoolessaa Koongireesii Oromoo hundeessuun ammas gara hirmaannaa siyaasaatti deebi’an.
Kaayyoon Paartiin Dr. Maraaraan hundessan kanaa inni guddaan biyyaa Itophiyaa jedhamtu keessatti uummatta bal’aa baroota heedduuf cunqurfamaa ture hiree isaa akka ofiin murteefatu gochuu ture.
Itti dabalees Afaan Oromoo Amaariffaatti dabalee Afaan Hojii Federaala akka ta’u gochuu ture.
Moggaasni maqaa paartichaa akka jijjiiramu miseensotaan haaluma gaafatmeen bara 2008 paartii Koongireesii Uummata Oromoo akka ta’u murteessuun hojii hooggansaa paartii siyaasaa isaanii itti fufan.
Dr. Mararaan paartilee siyaasaa biro waliinis ta’uun qindoomina biyyolessumaa paartilee siyaasaa gidduutti fiduuf paartilee ”Hibartii” fi ”Madrak” jedhaman hundeessuu fi dursuudhaaniis gahee olaanaa qabu.
Hojiilee siyaasaa maddiittis Yunivarsiitii hangafa biyyaatti Finfinnee keessatti baroota dheeraaf barsiisaa fi hoogganaa muummee barnoota saayinsii Siyaasaa ta’uunis tajaajilaa turaniiru.
Dr. Mararaa Guddinaa Miseensummaa Mana maree bakka bu’oota uummataaf dorgomanii kan turan yommuu ta’u filannoo bara 2002 naannoo dhaloota isaanii shawaa lixaatti injifachuun miseensa paarlamaa ta’aniiru.
Mana maree sana keessattis sagalee uummataa ta’uun fayidaan uummataa akka kabajamuuf gahee olaanaa bahaniiru.
Bara 2014 tti mormii naannolee Oromiyaa keessatti dhohee yeroo dheeraaf itti fufeen labsii yeroo hatattamaa cabsuun qaamolee farra nageenyaa ta’aniifii gareewwan shororkeesitoota jedhaman waliin hariiroo qabdu jedhamuun sadaasa bara 2016 hidhamaniiru.
Dr. Mararaan beekumsa saayinsii siyaasaa barataa ta’uuniifi barsiisummaan horatan akkasumas hoogganaa partii siyaasaa mormituu ta’uun horataniin Siyaasa Itoophiyaarratti barruulee heedduu barreesaniiru. Dhimmuma kana irrattis waltajjiwwan adda addaa irratti ibsa kennuuf afeeramaniiru.
Hidhamuu isaaniin duras sadaasa bara 2016 affeerraa Paarlaamaa Awroopaatiin miseensota paarlaamaa Awroopaaf haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru ilaachisee ibsa kennaniin labsii yeroo atattamaa mootumman Itophiyaa labse balaaleffatanii turan. Dabalataanis hooggantoota dhaabbilee paarlaamaa Itophiyaatiin shororkeessitoota jedhaman akka ‘Ginboot 7’ waliin wal arguun isaanii hidhamuu isaaniif sababa akka ta’e dubbatamaa jira.
Guyyaama kaleessaa Qabsaa’aan Oromoo Obbo Dhaqqaboo Waari’oo Hidhaarraa Hiikamaniiru.
Obboo Dhaqqaboo Wari’oo waggaa lama dura Goodina Aarsii Lixaa Magaalaa Shaashaamaannee irraa humna tika wayyaaneetiin butamuun Mana hidhaa Maa’ikeelaawwii keessatti hidhamaa erga turanii booda Man Murtiitti dhiheeffamuun, Abbaan alangaa Wayyaaneetiin Miseensa ABO Dha jedhamuun himannaa Shoororkeessummaa irratti banamus, ragaan gahaa isaanirratti waan hin argamneef Manni Murtii Federaalaa dhaddacha gaafa guyyaa 16/01/2009 wabii qarshii 7000‘n akka lakkifaman murtee dabarsus Poolisiin ajaja mana murtii fudhachuu diduun, hanga kaleessaatti hidhuun Mana hidhaa keessatti dararaa akka turan ni yaadatama.
Obbo Dhaqqaboo Waariyoo jaarsa buulessaa fi qabsaa’aa Oromoo umrii waggaa 71 hogguu ta’an, hidhaa fi dararaa waggaa lamaa booda guyyaa kaleessaa hidhaarraa akka hiikaman beekameera.
Akkasumas obbo Dastaa Dinqaa dura taa’aa Liigii dargaggoo paartii KFO, Lalisee Baahiruu, Caalaa Fiqaaduufi kanneen maqaan ammaaf nun dhaqqabiin muraasni guyyaa kaleessaa mana dabaa wayyaaneetii ba’aniiru.
Goodina Baalee Aanaalee Gammoojjii Keessatti Lammiiwwan Keenya Kanneen Poolisoota Liyyuu Haylii Soomaaleetiin Qe’eefi qabeenya isaaniirraa buqqa’anii Jiran Beela Hamaaf Saaxilamuun Hiraarfamaa Akka Jiran Beekame!
Lammiileen Oromoo poolisoota humna addaa Soomaaleen qe’eefi qabeenya isaanii irraa buqqa’uun aanaalee gammoojjii Baalee keessa jiran rakkoo beelaa hamaaf saaxilamuun hiraarfamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru.
Akkuma beekamu lolaa fi weerara qindaa’aa Murni bicuu TPLF fi Humni addaa Naannoo Soomaalee Uummata Oromoo fi Naannoo Oromiyaa irratti geggeessaa jiraniin ilmaan Oromoo 700,000 ol qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’uun yeroof Oromiyaa bakkeewwan gara garaa qubatanii akka jiran ni beekama.
Lolaa fi weerara qindaa’aa Uummata Oromoo fi Naannoo Oromiyaa irratti baname kana hordofuunis, lammiiwwan keenya qe’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqifamanii aanaalee gammoojjii Baalee keessa jiran beela hamaaf saaxilamuun dararamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru.
Lammiiwwan keenya kun gargaarsa hatattamaa hin argatan yoo tahe, balaan guddaa uumamuuf akka deemu kan akeekkachiisan maddeewwan keenya, Uummatni keenya biyya alaa fi keessaa, dhaabbileen gargaarsaa fi Mootummaan Oromiyaa dirmannaa hatattamaa gochuu akka qaban waamichi dhihaateera.
Haaluma kanaan yeroo hammaatti lammiiwwan keenya aanaalee gammoojjii Baalee keessa qubachuun gargaarsa hatattamaa barbaadan, Aanaa Beeltoo Nama 16,000, Gurraa Dhaamolee Nama 9000, Sawweena Nama 6000, Addeellee gara nama 3000 ol akka ta’an beekameera.
Hawaasnii keenya Kalatii hundaan jiru Akkumma kanaan dura Ummata keenya shiira diinatin qe’eef qabeenya isaani irraa buqaa’aniif Tumsa kalatii adda addaan taasisa ture ammas qaamni rakkoon hawaasa kooti ana malee qaama ilaalatu hin qabu jedhu hunduu rakkina kanaaf furmaata waara kenu irrat akka qooda keessan baatan dhaamsa Hatatamma dabarsuu barbaadna .
Lammiiwwan keenya kun gargaarsa hatattamaa hin argatan yoo tahe, balaan guddaa uumamuuf akka deemu kan akeekkachiisan maddeewwan keenya, Hawaaani Oromoo guutuu Oromiyaas ta’e kan biyya alaa, Mootummaan Naannoo Oromiyaa akkasumas Dhaabbileen gargaarsaa, Afooshaaleen Oromoo, Aktiivistoonnii fi miidiyaaleen hundi dhimma kana xiyyeeffannoo barbaachisu itti kennuun akkaataa lammiileen keenya gargaarsa hatattamaa argatan dhaamsa dabarsina.
Baha Oromiyaa aanaa Gursum Araddoota zoonii Booraalee keessatti reebicha hidhaafii doorsisni akkuma itti fufetti jiraachuun dhaga’ame.
#Ahmad_Abdi_Alii dabalatee dargaggoonni sadii magaalaa Qorii ifi Booraale irraa qabamanii bombaasitti eega hidhaman booda isiniitu booraale akka oromoo jala galtu kakasaa nurratti duulchisaa ture isin ABO ykn #Qeyroolamaanirraa tokko jechuun yeroo addaa addaa eega mana murtiitti dhiheeysan booda dargaggoonni kun nuti arras boruus oromoodha lafti teenyaas oromiyaadha ja’anii waan mana murtii # Abdi_Iilley waakkataniif bombaasitti asdeebisanii harkaafii miila walitti hidhanii fannisuudhaan bombaasitti nama oromoo himatu akkana goona ja’anii ummaata daawwachiisaa jirachuun dhaga’ameera.